Izinqubo Zesehlukaniso e-Dubai | Izinkampani Zomthetho eDubai
Izinqubo Zokuhlukanisa e-Dubai
Islamic Sharia Law for Isehlukaniso
Umthetho wamaSulumane weSharia ulawula amacala ezehlukaniso. Izimiso ze-Sharia zenza kube nzima ukuthi lo mbhangqwana ohlukanisiwe wehlukane, ngaphandle kokuthi ijaji likholwe ngokuphelele ukuthi inyunyana ngeke isebenze. Isinyathelo sokuqala enkambisweni yesehlukaniso kungaba ukufaka icala esigabeni Somhlahlandlela Womndeni naseMoral. Imibhalo maduze izodluliselwa enkantolo uma kwenzeka abashadayo, noma omunye wabo ephikelela ngesehlukaniso. Abangewona amaSulumane bangafuna ukuthi imithetho yamazwe abo isetshenziselwe amacala abo.
Abahlali bangasenza isicelo seSahlukaniso
Abangewona amaSulumane kanye nabanye abafudukayo bangafaka isicelo sesehlukaniso e-UAE noma ezweni labo (domicile). Kungaba nomvuzo ukuxhumana nommeli onolwazi ngesehlukaniso, ozozama ukuthola isinqumo esinokuthula kulezi zinhlangothi zombili.
Lezi zithandani zizosho izinhloso zazo zokuzama ukuchitha le nyunyana. Idivosi kungenzeka inikezwe uma kwenzeka umahluleli ethola ukuthi izinhloso ziyanelisa. Abanye bakholelwa ukuthi umyeni udinga nje ukucela kathathu isehlukaniso (Talaq) esehlukanisweni futhi unkosikazi usuphothuliwe. Lokhu akumi ngokomthetho futhi kuyisenzo nje esingokomfanekiso. Ngakolunye uhlangothi, isehlukaniso singanikezwa ijaji ngalezo zizathu, kepha isehlukaniso asikho emthethweni ngaphandle kokuthi sinikezwe izinkantolo.
Ngemuva kweTalaq, umfazi, ngaphansi kweSharia Law, kumele abheke i-Iddat. Iddat iqhubeka nezinyanga ze-3. Ngale ndlela umyeni uvunyelwe ukuphoqa umkakhe ukuba abuyele emnyangweni. Uma emva kwezinyanga ezintathu intombazane isadinga isahlukaniso, inyunyana izoqedwa yijaji. Umyeni angacela inqubo yeTalaq ngezikhathi ezintathu ezehlukene kodwa angamane ephikelela ukuthi ubuyele izikhathi ezimbili.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhlukaniswa?
Lokhu ngokuvamile kunqunywe yinkimbinkimbi yenkinga kodwa ingaba izinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha, ngezikhathi ezithile ngaphezulu, ngokuphathelene necala.
Ngenxa yokuthi umthetho wamaSulumane u-Sharia ulawula amacala okuhlukanisa, kungase kube nzima ukuba umbhangqwana ohlukanisiwe ukuhlukanisa njengoba ijaji kufanele liqiniseke ngokuphelele ukuthi inyunyana ngeke isebenze.
Lapho usuthathe isinqumo sokufaka isicelo sesehlukaniso, qinisekisa ukuthi uyakwazi futhi unengqondo ehluzekile ukwenza ezinye izindlela zakho. Lolu daba lube selufakwa esigabeni Somhlahlandlela Womndeni naseMoral in the Dubai Court. Ngokushesha ngemuva kwalokho, umeluleki uhlangana nabashadikazi ngaphambi kokuqala inqubo yesehlukaniso, ukukhuluma ngezinkinga zabo ukuthola ukuthi unethuba lokubuyisana yini.
Uma kwenzeka lo mbhangqwana uhlala e-UAE futhi bobabili amaSulumane / abangewona amaSulumane, umthetho we-Sharia / u-UAE uzobe usetshenziselwa ukuhlukanisa.